Mitady fanaraha-maso ny halalin'ny fanatoranana? Ireo sensor EEG tsy manafika dia tokony hampiasaina kokoa ~ orinasa sy mpanamboatra | Med-rohy
Mitady fanaraha-maso ny halalin'ny fanatoranana? Ireo sensor EEG tsy manafika dia mila ilaina kokoa ~
Ny lakilen'ny fanatoranana sy ny ICU dia ny fanaraha-maso ny halalin'ny anesthesia. Ahoana no fomba hahitantsika ny fanaraha-maso ny halalin'ny fanatoranana? Ho fanampin'ny filàna anesthesiologist efa za-draharaha, dia tokony ho matanjaka kokoa koa ny fanaraha-maso lalina momba ny fanatoranana sy ny sensor EEG tsy azo ampiasaina ampiasaina miaraka amin'ny monitor anesthesia.
Sensors EEG tsy manafika
Fantatsika fa ny halalin'ny fanatoranana dia ny ambaratonga izay manakana ny vatana amin'ny fiarahan'ny fanatoranana sy ny fanentanana ny vatana. Rehefa mihabe sy mihena ny hamafin'ny fanatoranana sy ny fanentanana, dia miova mifanaraka amin'izany ny halalin'ny fanatoranana.
Ny fanaraha-maso ny halalin'ny anesthesia dia ahiahin'ireo anestesista hatrany. Ny marivo loatra na lalina loatra dia miteraka fahavoazana ara-batana na ara-tsaina amin'ireo marary. Ny fitazonana ny halalin'ny fanatoranana dia ilaina mba hiantohana ny fiarovana ny marary ary hanome ny fepetra fandidiana tsara.
Voalaza fa ny BIS dia mifandraika tsara amin'ny fifantohan'ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina fanatoranana, koa ho an'ny fitarihana ny doka fanafody fanadontoana intraoperative, ny fampiasana ny fanaraha-maso ny BIS, araka ny valin'ny fanaraha-maso hitarihana ny fampiasana fanafody fanadontoana, izay afaka mitazona tsara kokoa ny halalin'ny fanatoranana ary milalao vokatra fanatoranana tsara.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia fanaraha-maso EEG tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny BIS (bispectralindex) dia nanjary fomba ekena hanaraha-maso tsara kokoa ny fiasan'ny cerebral cortex sy ny fiovana, ary azo ampiasaina ho fomba fanaraha-maso ny halalin'ny fanatoranana mahazatra sy azo antoka amin'ny fampiharana ara-pahasalamana.
Momba ny BIS
BIS dia salan'isa statistika azo avy amin'ny firaketana EEG avo roa heny amin'ny fivoahan'ny fanafody fanadontoana isan-karazany amin'ny santionany lehibe. Ity angon-drakitra ity dia nalaina indrindra tamin'ny santionany lehibe tamin'ny lohahevitra nahazo fanafody fanatoranana roa sosona natsofoka rakitsoratra EEG avo roa heny, ary ny fon'ny fahatsiarovan-tena, ny haavon'ny sedation, ary ny EEG voarakitra rehetra dia namorona tahiry. Avy eo, mifototra amin'ny spectrum frekuensi elektroencephalogram (EEG) sy ny spectrum herinaratra, ny isan'ireo fampahalalana mifangaro azo avy amin'ny famakafakana tsy andalana ny dingana sy ny harmonika.
Ny BIS no hany fanaraha-maso fanalan-masom-bidy anesthesia izay nankatoavin'ny US FDA, izay afaka manara-maso ny fiasan'ny cerebral cortical ary miova tsaratsara kokoa, manana fahatsapana marim-pototra haminavina ny fihetsiky ny vatana, ny fahatsiarovan-tena amin'ny intraoperative, ary ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena, ary afaka mampihena ny fanafody fanadontoana fanafody fomba marina kokoa amin'ny fitsarana ny haavon'ny sedation sy fanaraha-maso ny halalin'ny fanatoranana ataon'ny EEG.
Fanondroana fanaraha-maso BIS
BIS sanda 100, fanjakana mifoha; BIS sanda 0, tsy misy hetsika EEG (tsindrona kortikista cerebral), (fihenan'ny kortikôla seramika). Ny sandan'ny BIS amin'ny ankapobeny dia heverina ho ara-dalàna eo anelanelan'ny 85 sy 100. 65 ~ 85 dia mampitony; 40 ~ 65 dia fanatoranana. <40 Mey izao famoretana mipoaka izao.
Mba hahafahana manara-maso ny halalin'ny fanatoranana amin'ny alàlan'ny fotoana mahamety azy dia ilaina ihany koa ny sensor eeg tsy azo ampiasaina ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny halalin'ny anesthesia, mba hahafahan'ny isan'ny tondro amin'ny fanjakana rehetra haseho tsara.
Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd (izay antsoina hoe Med-linket) dia manana traikefa amin'ny fikarohana mandritra ny 15 taona amin'ny fivorian'ny tariby fitsaboana. Taorian'ny fanamarinana ara-pahasalamana an-taonany maro dia nanangana sensor EEG tsy azo resahina izahay, izay mifanaraka amin'ny mpanara-maso lalina momba ny fanatoranana miaraka amin'ny modely BIS toy ny Mindray sy Philips. Marefo ny fandrefesana, marina ny sandany, ary matanjaka ny fahaiza-manao fanoherana. Manampy ny mpitsabo fanatoranana hanara-maso akaiky ilay marary tsy mahatsiaro tena izany ary hanome fepetra mifehy sy fitsaboana mifanaraka amin'izany amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny toe-javatra fanaraha-maso.
Safidio ny sensor EEG tsy manafika an'i Med-linket, fantaro ny kalitaon'ny matihanina Med-linket, ny fambolena mafy mandritra ny 15 taona, ny fidinana an-tany, miaraka amin'ireo singa tariby ara-pahasalamana mahomby, manampy ireo marika an-trano hamaky.
* Fanambarana: ny mari-pamantarana rehetra voasoratra anarana, anarana, maodely sns aseho amin'ny atiny etsy ambony dia an'ny tompony na mpanamboatra tany am-boalohany. Ity lahatsoratra ity dia ampiasaina mba hanehoana ny fampifanarahana ny vokatra Med-Linket. Tsy misy fikasana hafa! Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo. ny fampahalalana dia ho an'ny referansa ihany, ary tsy tokony ampiasaina ho torolàlana ho an'ny asan'ny andrim-pitsaboana na vondrona mifandraika amin'izany. Raha tsy izany dia tsy misy ifandraisany amin'ity orinasa ity ny vokatra aterak'ity orinasa ity.
Manaraka: D-YS Sensor SPO2 multi-tranonkala azo ampiasaina azo ampiasaina
Fotoana fandefasana: Dec-06-2019